Akụkọ - Tianjin Cheng Yang Hot Products nke Silicon ntekwasa Faiba glaasi akwa
Silicone akwa a na-akpọkwa akwa silica gel, gel silica mgbe akwa okpomọkụ na-ekpo ọkụ vulcanization mere na acid na alkali na-eguzogide, abrasion eguzogide, elu na ala okpomọkụ na-eguzogide, corrosion eguzogide nke ọrụ bụ ụdị ngwa na mmiri ọgwụ, mmanụ refineries, ọdụ na iga, akpakanamde, ọgwụ, ulo oru mmiri ọkụ na uzuoku ndakpọ mmiri silicone tube, nri, na ndị ọzọ ọrụ, karịsịa a ụdị nke elu-edu silicone roba dị ka akụrụngwa iji nagide elu nsogbu nke multi-larịị elu voltaji silicone tube.
Multilayer silica gel tube na-eguzogide ọgwụ dị elu nwere ihe dị n'ime akwa oyi akwa, eriri braiding na-eme ka akwa na akwa oyi akwa. Ngwurugwu roba dị n'ime bụ akwa dị n'ime, a na-eji akwa eriri na-emechi akwa nke dị na mpụta.
Ngwongwo rọba nke eji akwa silica gel mee nwere uru dị ogologo ndụ na nnukwu nrụgide. O nwere ike iguzogide nrụgide nke 1MPa-10MPa, nke bụ oge 3-5 dị elu karịa eriri roba dị elu.Ọ nwere uru doro anya na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Silica gel ákwà ka nke iko eriri ákwà dị ka isi ákwà site na mkpuchi ma ọ bụ calendering. Ọ na-mere nke elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, anticorrosive na elu ike iko eriri ákwà site organic silicone roba calendering ma ọ bụ impregnating. Ọ bụ ihe eji emepụta ihe ọhụụ nwere nnukwu arụmọrụ yana ọtụtụ USES.
1. Eletriki mkpuchi: Silicone ákwà nwere a elu eletriki mkpuchi ọkwa, nwere ike idi elu voltaji ibu, nwere ike n'ime mkpuchi akwa, aka uwe na ndị ọzọ na ngwaahịa.
2. Non-dara compensator, silicone ákwà eji dị ka mgbanwe na njikọ ngwaọrụ nke pipeline, silicone roba ntekwasa iko eriri akpụkpọ ahụ Ọdịdị ihe onwunwe dị ka isi ihe nke mgbanwe mgbasa nkwonkwo. Ọ nwere ike idozi okpomọkụ bilges oyi Ada Ada ka mbibi nke ọkpọkọ, silicone ákwà na-akwa iguzogide elu okpomọkụ, anticorrosion, merela agadi na-eguzogide, ezi ekwedo na mgbanwe, nwere ike ọtụtụ-eji mmanụ ala, chemical, ciment, ike na ndị ọzọ ubi.
3. Anticorrosion: Silicone roba ntekwasa iko eriri ákwà nwere ike ji mee ihe dị ka esịtidem na mpụga anticorrosion oyi akwa maka pipelines, na magburu onwe anticorrosion arụmọrụ na elu ike. Ọ bụ ezigbo anticorrosion ihe.
4. Ndị ọzọ ubi: silicone roba ntekwasa iko eriri film film structural ihe nwere ike iji mee ihe akara ihe, elu okpomọkụ anticorrosive ebu belt, nkwakọ ihe na ndị ọzọ ubi.
A na-ekekwa akwa silica gel n'ime akwa gel silica otu na akwa akwa silica, na mgbakwunye, enwere akwa silica gel akwa na akwa ụlọ na-agwọ akwa gel silica.
Agba mgbe niile nke silica gel ákwà bụ vermilion, acha anụnụ anụnụ isi awọ, nwa, ọcha, na agba ndị ọzọ nwekwara ike ahaziri.
Uwe faiba glaasi, Acryli faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric, Aluminized faiba glaasi Cloth, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi,